1 / Igumbi leholide emaphandleni / indlu yabucala - I-Airbnb
1 / Igumbi leholide emaphandleni / indlu yabucala
Amagumbi amabini okuzenzela ukutya kwindawo ebukekayo, esandula kulungiswa uguqulo lwasezilalini kwilali yaseRoverbella (MN) kumda ophakathi kweMantova neVerona .. Kucetyiswa imoto. Ukupaka kwizakhiwo. Kufuphi nesikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe. Iikhilomitha ezili-15 ukusuka kwidolophu entle yaseMantova, iikhilomitha ezingama-30 ukusuka kwisixeko saseVerona kunye neArena entle kunye neekhilomitha ezingama-20 ukusuka kwiLake Garda entle.
Amagumbi amabini azimele ngokupheleleyo. Ngomnyango wabo wabucala. Kwindawo yasemaphandleni ezolileyo. Singqongwe yindalo. (kwabo bathanda ukupeyinta) Umjikelo kunye nomzila wokuhamba ziikhilomitha ezimbini kuphela ukusuka apha. Ukukhwela umjikelo we-10km ukuya kwilali yembali yase "Borghetto" kunye ne-20km enomdla ukuya kwi-peschiera echibini laseGarda. I-La strada del vino "ijikeleze thina kunye nee-wineries ezininzi zokutyelela. Ininzi yenkcubeko ukuze ibonwe kwaye ibe namava. Kwaye kwichibi elincinane laseGarda kunye nazo zonke izinto ezikhangayo ezifana ne-Gardaland "" i-Movieland "ipaki ye-acqua kunye ne-slides yamanzi e-vertiginious .
I-Roverbella ineebhari ezininzi kunye neendawo zokutyela kwaye ibekwe kwindawo enobuchule kakhulu kumda weLombardia kunye neVeneto.
Njengoko sihlala kwizakhiwo siyakuvuyela ukukunceda ngaso sonke isicelo sakho ukuba nanini na kunokwenzeka.